လက်သန့်ဆေးရည် သုံးတာထက် ဆပ်ပြာ နဲ့ လက်ဆေးတာက ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ပိုကာကွယ်နိုင် – Let Pan Daily
လက်သန့်ဆေးရည် သုံးတာထက် ဆပ်ပြာ နဲ့ လက်ဆေးတာက ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ပိုကာကွယ်နိုင်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ကြောက်စရာကောင်းပါတယ် ကြောက်သင့်ပါတယ်။ ကူးစက်မြန်တယ်။ သေစေနိုင်တယ်။ ကူးစက်ခံ ရပြီး သိပ်မကြာခင် အခန့်မသင့်လျှင် သေဆုံးနိုင်တယ်။တခြား ရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးမှုတွေ အများကြီးပါ။ လူဆိုတာ သေမျိုးပါပဲ .. နေ့တိုင်းသေနေကြတာပါ။ 2009 ခုနှစ် အမေရိကားက H1N1 တုပ်ကွေးက လူသန်းပေါင်းများစွာ ကူးစက်ခံရပြီး လူသိန်းချီ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တစ်နှစ်လျှင် TB ရောဂါကြောင့် ၁.၅ သန်း၊ HIV ကြောင့် လူ ၇.၇ သိန်း၊ ငှက်ဖျားကြောင့် လူ လေးသိန်းကျော် သေဆုံးနေပါတယ်။
မကူးစက်သော ရောဂါများ ကြောင့် တနှစ်လျှင် လူ သန်းလေးဆယ်ကျော် သေဆုံးနေပါတယ်။ အထူး အားဖြင့် နှလုံးရောဂါ ကင်ဆာရောဂါ ဆီးချို ရောဂါ ယာဉ်တိုက်မှု ထိခိုက်ခံရခြင်း အဝလွန်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တနှစ်မှာ နှလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ က ၁၇ သန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်….တကယ်တမ်း ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်… ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် သေဆုံးသူ အများစုကလဲ နဂို ရောဂါ အခံ ရှိနေကြတာများပါတယ် အမှည့်ကြွေတာပါ။ ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးနင်းခိုက်ပေါ့။ အကြောက်လွန်ပြီး နှာခေါင်းစည်းတွေ တပ်လိုက်ဖြုတ်လိုက် ပြန်တပ်လိုက်ယားလို့မျက်နှာကို ဟိုပွတ်ဒီပွတ် နဲ့မှ ရောဂါပိုး ကူးဖို့လွယ်မှာပါ။
မလိုအပ်ပဲ ခရီးမထွက်ပါနဲ့ မလိုအပ်ပဲ လူထူထပ်ရာ မသွားပါနဲ့။ လူစုလူဝေးနှင့် ဝတ်ပြု ခြင်းများ.. ကိုလျှော့ပါ (ဘာသာရေးကို ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ရပါ ဥပမာ ကိုးရီးယား ဝတ်ပြုကျောင်း)လက်ဆေးခြင်း. (လက်ကို hand senitzier နဲ့ဆေးတာထက် ဆပ်ပြာနဲ့စက္ကန့် ၂၀ သေချာ ဆေးကြောတာ က ပိုကောင်းပါတယ်)စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချခြင်း ကျန်းမာအောင် နေထိုင်စားသောက်ခြင်းတို့ကို အဓိက ထား ပြုမူနေထိုင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အပြင် အခြားသော ရောဂါတွေကိုလဲ ကြောက်စေချင်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈက ကွောကျစရာကောငျးပါတယျ ကွောကျသငျ့ပါတယျ။ ကူးစကျမွနျတယျ။ သစေနေိုငျတယျ။ ကူးစကျခံ ရပွီး သိပျမကွာခငျ အခနျ့မသငျ့လြှငျ သဆေုံးနိုငျတယျ။တခွား ရောဂါတှကွေောငျ့ သဆေုံးမှုတှေ အမြားကွီးပါ။ လူဆိုတာ သမြေိုးပါပဲ .. နတေို့ငျးသနေကွေတာပါ။ 2009 ခုနှဈ အမရေိကားက H1N1 တုပျကှေးက လူသနျးပေါငျးမြားစှာ ကူးစကျခံရပွီး လူသိနျးခြီ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ဒါ့အပွငျတဈနှဈလြှငျ TB ရောဂါကွောငျ့ ၁.၅ သနျး၊ HIV ကွောငျ့ လူ ၇.၇ သိနျး၊ ငှကျဖြားကွောငျ့ လူ လေးသိနျးကြျော သဆေုံးနပေါတယျ။
မကူးစကျသော ရောဂါမြား ကွောငျ့ တနှဈလြှငျ လူ သနျးလေးဆယျကြျော သဆေုံးနပေါတယျ။ အထူး အားဖွငျ့ နှလုံးရောဂါ ကငျဆာရောဂါ ဆီးခြို ရောဂါ ယာဉျတိုကျမှု ထိခိုကျခံရခွငျး အဝလှနျခွငျး တို့ကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ တနှဈမှာ နှလုံးရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးသူ က ၁၇ သနျးခနျ့ဖွဈပါတယျ….တကယျတမျး ဆနျးစဈကွညျ့လိုကျရငျ… ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကွောငျ့ သဆေုံးသူ အမြားစုကလဲ နဂို ရောဂါ အခံ ရှိနကွေတာမြားပါတယျ အမှညျ့ကွှတောပါ။ ထနျးသီးကွှခေိုကျ ကြီးနငျးခိုကျပေါ့။ အကွောကျလှနျပွီး နှာခေါငျးစညျးတှေ တပျလိုကျဖွုတျလိုကျ ပွနျတပျလိုကျယားလို့မကျြနှာကို ဟိုပှတျဒီပှတျ နဲ့မှ ရောဂါပိုး ကူးဖို့လှယျမှာပါ။
မလိုအပျပဲ ခရီးမထှကျပါနဲ့ မလိုအပျပဲ လူထူထပျရာ မသှားပါနဲ့။ လူစုလူဝေးနှငျ့ ဝတျပွု ခွငျးမြား.. ကိုလြှော့ပါ (ဘာသာရေးကို ဆနျ့ကငျြတာ မဟုတျရပါ ဥပမာ ကိုးရီးယား ဝတျပွုကြောငျး)လကျဆေးခွငျး. (လကျကို hand senitzier နဲ့ဆေးတာထကျ ဆပျပွာနဲ့စက်ကနျ့ ၂၀ သခြော ဆေးကွောတာ က ပိုကောငျးပါတယျ)စိတျဖိစီးမှုကို လြော့ခခြွငျး ကနျြးမာအောငျ နထေိုငျစားသောကျခွငျးတို့ကို အဓိက ထား ပွုမူနထေိုငျဖို့က ပိုအရေးကွီးတယျလို့ယူဆပါတယျ။ဒီကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အပွငျ အခွားသော ရောဂါတှကေိုလဲ ကွောကျစခေငျြပါတယျ။
(25.6.2020) မှ (1.7.2020) အထိ (၇) နေ့ သားသမီး တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
မျက်ရည် လွယ်ရင် မဖတ်ကြ ပါနဲ့၊ ဖတ်ပြီး ရင်လည်း မငိုကြ ပါနဲ့ …
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း မှာ လူတွေ အဖြစ်များလာ တဲ့ နောက်ထပ်ရောဂါ တစ်ခုအကြောင်း
အင်မတန် မှ ဖူးရခဲတဲ့ “ငါးမျက်နှာဘုရား” တည်ရှိရာ နေရာ